Tignanello ndiye akatanga Sangiovese kuve zera mumabharati, waini mutsva wewaini tsvuku wakasanganiswa neyekusagadziriswa marudzi (zvakananga Cabernet) uye imwe yeiyo yekutanga tsvuku waini mudunhu reChianti Classico iyo isingashandise machena mazambiringa. Tignanello chiitiko chinokosha. Iyo inogadzirwa nesarudzo yeSangiovese, Cabernet Sauvignon, uye Cabernet Franc.
Silvio Coppola akagadzira iyo label muna 1974 kuburitswa kwaTignanello 1971. Pfungwa yekuraira muimbi uyu yakakurukurwa pachiitiko kuCastello Della Sala muna 1973. Silvio Coppola aive akakosha muItaly graphic nemukati wemukati aive nemukurumbira wemagadzirirwo ake eminimalist. uye ficha ficha asiwo bhuku rekuvhara dhizaini yekuItaly yekuburitsa kambani Feltrinelli. Silvio Coppola ndiye akakwana mutambo webasa.
Iyo Marchesi Antinori 2016 Tignanello (yakagadzirwa neSangiovese uye zvidiki zvidimbu Cabernet Sauvignon uye Cabernet Franc) yakasviba, inowedzera, uye inokoka waini. Ndakaravira sampu yangu mushure mekuraira kaviri uye ndakafadzwa nehunhu hwewaini zvakanyanya uye pachena kweanonhuwira. Iko kune symphony yemichero yakasviba neiyo dema cherry, plum, zvinonhuwira, uye fodya inotapira. Ini ndinonyanya kufadzwa nezano riri kure rekurapa kana menthol yemakwenzi ini yandakawanawo mune mamwe mavheji ane michero kubva kuTignanello estate muna 2017. Kune yekuomeswa kwemaminerari noti ye yakapwanywa chaki zvakare. Iko kupisa uye kuoma kwewaini yakawedzera kune kunhuhwirira kwehukuru hwewaini (yechitatu yakaderedzwa goho). Zvichakadaro, muromo-upfu wakanyatsogadzirwa kuti uchengetedze unyoro uye kutsiga.